မတ်လ ၁၃ ရက်တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော သတင်းထောက်တစ်ဦးနှင့် ကျောင်းသားနှစ်ဦး၏ အတွေ့အကြုံများ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Comments on Malaysian PM YAB Datuk Sri Najib’s FB on Myanmar President’s visit
နှစ်ဖက်လုံးကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ် »
7Day News Journal မတ်လ ၁၃ ရက်တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော သတင်းထောက်တစ်ဦးနှင့် ကျောင်းသားနှစ်ဦး၏ အတွေ့အကြုံများ
ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ် (ကုန်ထုတ်ဓာတု)
ကျွန်တော့်ကို ဖမ်းတဲ့အချိန် မှာ ကျွန်တော်က အလံကိုင်ထား တယ်။ သူတို့ဘက်က ခဲလုံးတွေ စရောက်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တချို့ ကျောင်းသားတွေက ခဲလုံး နဲ့ တစ်လုံး၊ နှစ်လုံး ပစ်ကြတာမြင် တယ်။ အဲဒါကို သူတို့ဘက်က ခဲတွေရောက်လာပြီး မကြာခင်မှာ ပဲ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကို အလုံး အရင်းနဲ့ ၀င်ရိုက်တော့တာ။ ကျွန် တော်က အလံကိုင်ထားတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဆယ့်လေးငါး ယောက်လောက် ၀ိုင်းရိုက်တယ်။ ခြေထောက်တွေနဲ့ ကန်တယ်။ ဒါ က ဖိနပ်နဲ့ အကန်ခံရတာ(မျက်နှာ မှ ဒဏ်ရာကို ညွှန်ပြ၍)။ ဒါက နံပါတ်တုတ်နဲ့ အရိုက်ခံရတာ (ဦး ခေါင်းမှာ ပတ်တီးဖြင့် ပတ်ထား သည့်ဒဏ်ရာကို ညွှန်ပြ၍)။ ဒီ ကျောကုန်းတွေ၊ နံရိုးတွေ၊ လက် မောင်းတွေမှာဆိုရင် နံပါတ်တုတ် နဲ့ ရိုက်ထားတာ။
သူတို့ကို နဂိုက တည်းက ပြောတယ်။ အေးအေး ဆေးဆေးအဖမ်းခံမယ်။ ဒီလို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမလုပ်ပါနဲ့ ပြောတယ်။ ဒါကို သူတို့က ကြမ်း ကြမ်းတမ်းတမ်းဝင်ရိုက်တာ။ သူ တို့ကို အီးယူက သင်ပေးထားတာ ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ဖို့။ ထောင်ထဲမှာ ပထမဆုံးက ဆေးရုံဆောင်မှာ နေရတယ်။ နောက်ပိုင်းသက်သာလာတော့ ကျန်တဲ့ ကျောင်းသားတွေရှိတဲ့ ဆီပို့တယ်။
(The Reporter ဂျာနယ်)
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ ဒုတိယနှစ် (ရူပဗေဒ)
This entry was posted on March 14, 2015 at 10:51 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.